Honor 6X ga - enweta Android 7.0 Nougat na EMUI 5.0 na Machị | Gam akporosis
Honor 6X ga-enweta Android 7.0 Nougat na EMUI 5.0 na Machị
Nyaahụ anyị gosiri gị vidiyo ebe ị nwere ike ịhụ a ọchịchọ nnwale ọnwụnwa ejiri a Nsọpụrụ 6X. Taa, anyị ewetara gị ezigbo ozi maka ndị ọrụ ekwentị a.
Ma nke ahụ bụ Honor 6X, nke na-abịa na EMUI 4.1 na gam akporo 6.0 rGa-enweta mmelite nke ga-eweta ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google yana EMUI 5.0 gaa n'etiti ọhụrụ nke ndị na-emepụta Eshia. Ekwentị, nke ekpughere na CES ikpeazụ na Las Vegas, a na-atụ anya ịnweta òkè ya nke gam akporo 7.0 Nougat n'oge na-adịghị anya, mana ọ bụ nnukwu ozi ọma na a ga-emelite ya ngwa ngwa.
1 The Honor 6X ga-enweta gam akporo 7.0 Nougat n'oge na-adịghị anya
1.1 Sọpụrụ 6X nkọwa
The Honor 6X ga-enweta gam akporo 7.0 Nougat n'oge na-adịghị anya
Ekwentị nwere ọtụtụ njirimara teknụzụ zuru ezu iji nwee ike ịkwaga ụdị ọhụrụ nke sistemụ Google nke enweghị nnukwu nsogbu. Maka nke a, ndị otu Honor enyela ya akụrụngwa zuru ezu, dịka ị ga-ahụ n'okpuru.
Sọpụrụ 6X nkọwa
5,5 ”ihuenyo (1080 x 1920) Full HD 2.5D curved glass IPS
Octa-isi Kirin 655 mgbawa (4 x 2.1 GHz + 4 x 1.7 GHz) 16 nm
3GB / 4GB nke RAM na 32G nke nchekwa, 4GB nke ebule na 64GB nke ebe nchekwa dị n’ime. Ihe abụọ a nwere ike ịgbasa site na micro SD ruo 128GB
12 MP n'azụ igwefoto na ikanam flash, 6P oghere, 1,25um pixel size, PDAF na 2MP nke abụọ igwefoto
8MP ihu igwefoto
Akụkụ: 150,9 x 72,6 x 8,2mm
Batrị 3.340 mAh nwere nkwado ngwa ngwa
Na nkenke, ekwentị zuru oke nke ruru ahịa na ọnụahịa dị egwu: 249 euro. N'ileghachi anya na njirimara ọrụ ya, ọnụahịa na eziokwu na ọ ga-enweta Android 7.0 Nougat, kedu ihe ị chere maka Honor 6X ọhụrụ a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Honor 6X ga-enweta Android 7.0 Nougat na EMUI 5.0 na Machị
Machị 2018? HA HA HA HA HA HA HA
Samsung Galaxy A5 nke mbụ ga - emelite ya na gam akporo 7.0 Nougat
Firefox OS na-apụ n'anya ma na-anwa ịsọ mpi megide gam akporo